Vibenomics အသံအိမ်ပြင်ပ ကြော်ငြာ- စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော၊ တည်နေရာအခြေခံ ဂီတနှင့် စာတိုပေးပို့ခြင်း | Martech Zone
Vibenomics အသံအိမ်ပြင်ပကြော်ငြာ- စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော၊ တည်နေရာအခြေခံဂီတနှင့် စာတိုပေးပို့ခြင်း
စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 24, 2018 အင်္ဂါနေ့, မတ်လ 8, 2022 Douglas Karr
Prime Car Wash CEO Brent Oakley မှာ ပြဿနာရှိခဲ့ပါတယ်။ သူ၏ ပရီမီယံကားရေဆေးခြင်းများသည် ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရသော်လည်း ၎င်း၏ဖောက်သည်များသည် ၎င်းတို့၏ကားပေါ်တွင် စောင့်နေကြစဉ်တွင် ၎င်းတို့ပေးဆောင်ရမည့် ထုတ်ကုန်အသစ်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို မည်သူမျှ မပါဝင်ခဲ့ကြပေ။ သူသည် ၎င်း၏ဖောက်သည်များထံ စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်ထားသော၊ တည်နေရာအခြေခံ မက်ဆေ့ချ်များနှင့် သီချင်းများကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့် ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့သည်။
In-store ရေဒီယိုမှတစ်ဆင့်ကားရှေ့မှနျအဝတ်လျှော်အစားထိုးခြင်းကိုမြှင့်တင်သောအခါသူသည်လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်အတွင်းရောင်းခဲ့သည့်ရောင်းဝယ်မှုထက်တစ်လအတွင်း wipers ပိုမိုရောင်းချခဲ့သည်။ Brent သည်သူဖောက်သည်များအတွက်အဖြေတစ်ခုမျှသာမက၊ သူလိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုရှိသည်ကိုသူသိသည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်ကားဆေးကြောခြင်းလုပ်ငန်းမှထွက်ခွာခဲ့သည် Vibenomics.
Vibenomics သည် တည်နေရာအခြေပြု Audio Out-of-Home™ ကြော်ငြာနှင့် လက်လီရောင်းချသူများအတွက် အော်ဒီယိုချန်နယ်များကို အားဖြည့်ပေးသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး၊ အမှတ်တံဆိပ်များကို ရောင်းချသည့်အချိန်တွင် ဈေးဝယ်သူများအား တိုက်ရိုက်စကားပြောဆိုနိုင်စေမည့် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အစွမ်းထက်သော cloud-based နည်းပညာ၊ လိုင်စင်ရ နောက်ခံတေးဂီတစာကြည့်တိုက်၊ ဒေတာပေါင်းစည်းနိုင်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အ၀ရှိသော အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၊ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် လိုအပ်သလောက် ကျွမ်းကျင်သော အသံစွမ်းရည်များကွန်ရက်ဖြင့်၊ ကုမ္ပဏီသည် ကြော်ငြာသူ 150 ကျော်အတွက် မှန်ကန်သော ဝင်ငွေတိုးစေမည့် vibe ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ပြည်နယ် 6,000 ခုတွင် နေရာပေါင်း 49 ကျော်ရှိပြီး လူဦးရေ သန်း 210 ကျော်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
လက်လီအရောင်းဆိုင်များသည် လိုင်စင်ရ တေးဂီတဖြေရှင်းချက်များအတွက် မကြာခဏ ပေးချေလေ့ရှိသော်လည်း Vibenmoics သည် အမှန်တကယ်တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပြန်ရနိုင်သည့် တေးဂီတနှင့် စာတိုပေးပို့ခြင်းဖြေရှင်းချက်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။
Vibenomics သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို သင်တောင်းဆိုသည့်နေ့တွင်ပင် ၎င်းတို့အား သင်တောင်းဆိုသည့်နေ့တွင် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော၊ ကျွမ်းကျင်စွာမှတ်တမ်းတင်ထားသော ကြေငြာချက်များကို တင်သွင်းခြင်းနှင့် လက်ခံနိုင်စေမည့် လိုင်စင်အပြည့်ရှိသော တေးဂီတစာကြည့်တိုက်နှင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူသောအက်ပ်တစ်ခုအား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။ လုပ်ငန်းများသည် bandwidth သို့မဟုတ် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြဿနာများအတွက် စိတ်ပူစရာမလိုပါ - ပလပ်ဖောင်းသည် Sprint-powered tablets များပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ အဲဒါကို ပလပ်ထိုးလိုက်ရုံနဲ့ ပြေးနေတာပဲ။
လိုက်လျောညီထွေရှိသော plug-and-play၊ တစ်ဦးတည်းပိုင်၊ IoT ဖွင့်ထားသော မီဒီယာပလေယာများမှတစ်ဆင့် Vibenomics သည် hyper-targeted၊ လိုအပ်သလောက် အသံကြော်ငြာများနှင့် လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာနေသော အမျိုးသားခြေရာကိုဖြတ်၍ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ပေါင်းစပ်ထားသော နေရာများတွင် ပေးပို့ထားပြီး၊ အားကောင်းသည့်စျေးဝယ်သူစျေးကွက်ရှာဖွေရေးချန်နယ်ကို လော့ခ်ဖွင့်ပေးပါသည်။ ဝယ်ယူမှုလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် အရေးကြီးသော နောက်ဆုံးခြေရာများအတွင်း စားသုံးသူများထံ ရောက်ရှိစေရန်။ ၎င်း၏ပထမဆုံးသော မိတ်ဖက်ပရိုဂရမ်တစ်ခုမှတစ်ဆင့်၊ လက်လီရောင်းချသူများသည် ၎င်းတို့၏တည်နေရာအတွင်းကစားသည့် Vibenomics မှရောင်းချသော ကြော်ငြာများအားလုံးအတွက် ဝင်ငွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ရရှိနိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ပုဂ္ဂလိကလေလှိုင်းများကို ငွေရှာနိုင်စေကာ အမွေဆက်ခံစရိတ်ကို အမြတ်အစွန်းအသစ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်။ .
ကုန်ပစ္စည်းများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာတွန်းပြီးဖောက်သည်တိုင်းအတွက် ၀ င်ငွေအလားအလာကိုမြှင့်တင်ပါ။
ကူပွန်များနှင့်ပရိုမိုးရှင်းအတွက်သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့ဖောက်သည်များအားမောင်းနှင်ပါ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စာတိုပေးပို့ခြင်းကို ထုတ်ဝေနိုင်ရုံသာမကဘဲ ပြင်ပကုမ္ပဏီကြော်ငြာသူများထံသို့လည်း ၎င်းတို့၏ကွန်ရက်ကို ဖွင့်နိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့ထွက်စစ်ဆေးပါ။ ဖြေရှင်းချက် သူတို့သည်သင်၏စက်မှုလုပ်ငန်းကိုကူညီနိုင်သည်အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်။
Brent နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာဗျူးကိုနားထောင်ပါ Vibenomics Demo တစ်ခုကိုတောင်းဆိုပါ
Tags: aoohaoo ကြော်ငြာမက်ဆေ့ခ်ျပို့ဂီတOOHအိုး ကြော်ငြာအိမ်ပြင်ပကြော်ငြာရေဒီယိုကွန်ယက်လက်လီအသံvibenomics